ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်းနှင့်အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကွဲပြားမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
J ကိုလိင် Med ။ 2016 ဇူလိုင် 30 ။ pii: S1743-6095(16)30309-5. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.06.015.
မိုင်းလုပ်သား MH1, Romine သည် RS2, ရေမွန် N ကို3, Janssen E ကို4, Macdonald တစ်ဦးက 3rd5, Coleman E ကို6.
Hypersexuality ဆိုတိကျတဲ့စိတ်ကူး၏ထောက်ခံမှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့ပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်, အခြားသူများအကြား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, compulsive နှင့် Impulse အဖြစ် conceptualized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက် hypersexuality မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်။
လိင်တူဆက်ဆံသူကို 242 ယောက်ျား၏တစ်ဦးကနမူနာတစ်ခုအလယ်အလတ်အရွယ်အစားလယ်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းမွို့၌အမျိုးမျိုးသောက်ဘ်ဆိုက်များကနေစုဆောင်းခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders များအတွက် Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူး, စတုတ္ထ Edition ကိုဆင်တူအင်တာဗျူးသုံးပြီး hypersexuality အုပ်စုတစ်စုဒါမှမဟုတ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတာဝန်ကျတယ်။ self-အစီရင်ခံစာသိုလှောင်မှုအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှု, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပိုပြီးကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဆောက်လုပ်ရေး, အမူအကျင့်ကို Activation, အမူအကျင့်တားစီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီး, Impulse, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ၏ကျယ်ပြန့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Construction တိုင်းတာကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည် ရောဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။
hierarchical Logistic ဆုတ်ယုတ်သောဤကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အမူအကျင့် variable တွေကိုနှင့်အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်အကြားစပ်လျဉ်းဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်တစ်ဦးက hierarchical Logistic ဆုတ်ယုတ် hypersexuality နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်သတ်နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာနှင့်စပ်လျဉ်းအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောစပ်လျဉ်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါအမူအကျင့်ယန္တရား variable တွေကိုအဘယ်သူအားမျှဒီညီမျှခြင်းဝင်ကြ၏။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုခန့်မှန်းတဲ့ hierarchical မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းအပြုသဘောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပျက်ကွက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေသော်ငြားလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ညွှန်ပြ နှင့်အဆိုးစွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးဆက်များ၏ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အထွေထွေအပြုအမူတားစီးနိုင်ခြင်းမရှိစေရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးနှင့်ဆက်စပ်သော
Hypersexuality စိတ်ခံစားမှု reactivity ကို, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့် Impulse ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်၏ဆက်စပ်မရှိခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ excitatory နှင့် inhibitory ယန္တရားများအသုံးပြုပုံသော်လည်းမယေဘုယျအမူအကျင့်ကို Activation နှင့် inhibitory ယန္တရားများကလွှမ်းမိုးနေသည်။
Hypersexuality; Impulse; လိင်စွဲ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive